iPhoto, xiddiga nuuraya iLife, waa codsi sawir fantastic yimaado pre-rakibay X. Mac OS ka iPhoto u sahashay in ay la socdaan xusuus qaali ah, abaabulka iyo iyaga sixiddiisa, iyaga jeestay galay mashaariic kala duwan sida slideshow, sawir-buugaagta , sawir-taariikheed, sawir-kaarka oo iyaga la wadaago Facebook, twitter, iwm Marka laga xaaladdaada user Mac, waxaad u baahan tahay waqti ka mid ah in loo isticmaalo in lagu iPhoto. Halkan waxaa ku qoran 25 nasteexooyin waxtar leh iyo tabaha oo kaa caawin doona inaad si uu u noqdo user awood kama dambaysta ah ee iPhoto.
1. Image Screen Full Faalladaada
Isticmaal habkaani in xaalkaa images in hab shaashad buuxda. Waxaad ku samayn kartaa saddex siyaabood:
Xulashada 1: Dooro sawir inay wax ka bedel. In Bar Menu xulan View> Full Screen iyo sawirkaaga kori doono shaashad buuxda. Riix furaha u baxso laabto hab caadi ah.
Xulashada 2: Dooro sawir inay ka bedel. Xaq-riix dooro "Edit Isticmaalka Full Screen".
Xulashada 3: Waxaad sameyn kartaa iPhoto si toos ah in la furo dhammaan sawiro aad rabto in aad wax ka bedel hab Screen Full. Si tan loo sameeyo, in Bar Menu xulan iPhoto> rabtid (ama Command saxaafadeed + comma). Dooro tab guud iyo dooro "Isticmaalka Full Screen" ka menu Edit Photo hoos-hoos.
2. Isticmaal Smart Qaasaali in Hayso iPhoto Videos & Photos Marka laga reebo
Marka aad soo dhoofsadaan videos in iPhoto, videos doono is tuuray oo dhan sawirada. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, waxaad isticmaali kartaa Smart Album in sooci videos ah. Halkan sida:
Burcad iPhoto oo taga si File> New> Smart Album. Markaas daaqad tusi doonaa, oo aad samayn kartaa Sharciyada uu iPhoto kala sooci doonaa fikirina. Halkan waxa aad sameyn kartaa kaliya xukunka sida "Photo waa Movie" si ay u ururiyaan oo dhan videos in mid ka mid album.
3. Samaynta, Iyo La Isticmaal Maktabadaha Multiple
Habkaani caawin doonaa markii aad la tiro badan oo sawiro looga qabto. Tani feature anfacaya sidoo kale kaa caawin kartaa in aad kala photos qoyska iyo sawiro aad qaadato shaqo.
In la abuuro maktabad cusub, halka ay furan iPhoto qaban hoos u muhiim ah Xulashada. Wada hadal cusub arbushin doonaa weydiinaya haddii aad rabto in aad doorato maktabad kale, la abuuro maktabad cusub, ama doorato maktabadda kale (oo ay ku jiraan default) in iPhoto horey u og yahay. Riix Abuur Cusub oo sheeg magaca iyo badbaadin goobta in sanduuqa lagu dhibciyo hoos. iPhoto hadda ku shuban doona iyo muujiyaan maktabad cusub. Si aad u beddelaan maktabadaha, hoos u hay muhiim ah Option on xawaaladaha oo guji badhanka kale Library, falgali maktabada kale, ka dibna dooro Open.
4. Abaabulaan iPhoto Library Your
Marka ugu horraysa ee aad furto iPhoto aad ka arki kartaa siyaabo kala duwan oo abaabulo sawiro aad bidix aad u sareysa. Waxaad u abaabuli kartaa sawirro aad by dhacdooyinka, by Wajigooda, taariikh, magacyo xataa meelaha aad soo booqato.
Waxa kale oo aad abaabuli kartaa sawir la isticmaalayo isku-dar ah Calanka iyo furaha, kaas oo kaa caawin doona in la helo sawirka dhabta ah ka badan oo sawiro. Si aad ku dari keyword ah, dooro sawirka, ama sawiro, in iPhoto, ka dibna riix mid ka mid ah keywords ah. Waxa kale oo aad ku dari kartaa keywords kuu gaar ah.
Photo Stream waa qayb ka mid ah iCloud in wada hagaagsan oo dhan sawiradaada. Taas macnaheedu waxa weeye haddii aad qaadato sawir aad iPhone ama u iPad si toos ah u hagaagsan doonaa adiga iyo Computer. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa u celin ku saabsan. Si on Photo Stream aad u baahan tahay inay la soo wareegto si ay iCloud.
6. Copy Pictures ka iPhoto in Folder kale
Haddii aad rabto in ay helaan sawir asal ka iPhoto, waxaad iyaga nuqul ka kartaa desktop ama meel kale doorataa mid aad rabto in aad soo jiiday & iyaga tagtey gal folder kasta.
7. Calan Image ah sida Background Desktop
Waxaad sameyn kartaa image ka maktabadda iPhoto sida wallpaper desktop aad. In sidaa la yeelo, waxa ay doortaan oo taga si wadaag> Desktop Calan
8. KU QOR Images la Xuduudda kala duwan, soo jeeda iyo Layouts
Waxaad ka daabacan kartaa sawir ama sawiro si fudud iPhoto. Dooro sawirka aad rabto in aad daabacdo. Markaasuu u tag sare bidix geeska File> Print. Waxaad heli doontaa fursado sida caadiga ah sheet, la xiriir, xadka hal, derin hal, derin double. Mid ka mid ah in aad u qanciso baahan Dooro iyo guji daabacan.
9. Muqaal ah oo aad Photos Best:
Waxaad samayn kartaa slideshow ah sawiro aad si fudud ayaa la iPhoto. In ay sidaa sameeyaan, si fudud u furo iPhoto, iyo muujiyo koox ka mid ah sawirada aad jeclaan lahaa in la abuuro slideshow ah. Markaas riix badhanka dar dooro slideshow dhibic soo socda hoos menu. Dooranaysaa slideshow cusub. iPhoto kuu diyaarin doona sawiro ku salaysan toosan. Markaas theme iyo music qabsado dari maktabadda Lugood in aad slideshow si ay u cajiib ah oo la siiyo horyaalka ah, waxa uu. Waxa kale oo aad ku dari kartaa qaar ka mid ah saameyn kala guurka si sawirka shakhsi. Marka ma sixiddiisa, riix badhanka kulanka xiisaha leh ee si aad u aragto slideshow daaqad iPhoto ah, ama Play in ay shaashad buuxda arko. Waxa kale oo aad dooran kartaa dhoofinta inuu u diro sida file video in qaabab kala duwan ah.
10. takhalusid & Sawiro joogto ah saarida in iPhoto
iPhoto leedahay qashinka aad u gaarka ah. Photos in aad tirtirto ka iPhoto tagaan si ay qashinka this, iyo haddii ay tahay madhan, ay sii wadaan in ay degan tahay oo aad disk adag. Faaruqinta qashinka nidaamka sidoo kale saameyn ah kuma laha on this. Si aad u faaruqiso qashinka iPhoto, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa Control + Riix icon Trash ka galeeysid iPhoto ah, ama isticmaal badhanka Trash faaruqa ah ee geeska midig sare, iyo dhammaan images joogto ah ka saari doonaan. Sida Trash nidaamka, ma eegista idin tagsiin karo sawiradaan.
11. Stop iPhoto ka Bilaabanaya markii Camera xiran yahay
iPhoto taageertaa loo dhoofiyo iyo sawiro abaabulka ka camera aad, oo laga furay wakhti kasta oo aad camera aad ku xidhi. Haddii aad rabto in aad gab habkaani, u tag la door iPhoto ee, iyo kamarad xiridda dropdown furmay, dooro codsiga No.
12. furan iPhoto Maktabada in Finder
Habkaani ka caawisaa in ay dhibta haddii wax qaldamaan maktabadda iPhoto. Ma laga yaabaa in aad rabto in aad halkan taabto wax kasta oo aad haddii aanay ahayn kuwo leh xirfad ku filan sidii isbeddel kasta oo aan la soo bixi karaa haddii xoogsashada tirtiray qalad ah. Si aad u furato maktabadda iPhoto ee Finder, u tag folder sawirada, oo halkaas waxaad arki doontaa maktabadda iPhoto. Xaq-riix waxaa, oo ka menu macnaha guud, dooro View "Xirmada Tusmada" inuu soo galo maktabadda iPhoto aad u reebay. The "Masters" dukaamada folder oo dhan sawirada asalka ah. Waxay waxaa lagu kala soocaa galay fayl-hoosaadka ay maalinta, bisha iyo sanadka.
13. dhaqaaq Library in meel ka duwan ama External Drive
Raritaanka maktabadda iPhoto noqon mid aad u fudud in iPhoto '11. Waxaad kaliya u baahan tahay inaad jiidi maktabadda aad rabto in aad u guurto oo hoos u folder aad la doonayo ama drive dibadda. Intaadan sidaas yeelin, waa inaad hubisaa inaad xirto iPhoto first.iPhoto si toos ah u diiwaan doonaa isbedelka marka xigta ee aad u abuurtaan.
14. cadaadi & Resize Image ah
iPhoto ma shaqeyn karno dhabta ah images ceeriin iyo beddelayo mid ka mid ah asalka. Laakiin waxaa suurto gal ah inay u dhoofiyaan image kasta iyo cadaadin iyo iyaga resize. Tag File> dhoofinta, badbaadin image qaab jpeg dooro heerka riixo ka dropdown Tayada jpeg. Laga soo bilaabo dropdown Size ah, dooro caadadii oo qeexaya width ama height of image oo guji dhoofinta. Image waxaa lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC doonaa oo resized. Later aad dajiyaan karaa inaad sanam u iPhoto iyo tirtirto mid weyn.
15. Isticmaalka Time Machine keena Photos Back masaxay
Waxaad keensan kartaa dib u tirtiray photos, albums, dhacdooyinka iyo ka badan oo ka iPhoto haddii aad leedahay makiinadda markii enabled.To raadiyo waxyaabaha tirtiray iPhoto, si fudud u furo codsiga iPhoto iyo abuurtaan Time Machine ka bar menu ama dajinayo. Marka aad samayn, iPhoto furi doonaa in Time interface Machine ah, kuu raadiyo waxyaabaha la tirtiro. Riix shay dooro Soo Celinta inay u soo celiso maktabadda iPhoto aad hadda.
16. midowdo Dhacdooyinka
Event photos waxaa loo kala qeybin karaa ilaa inta lagu guda jiro dejinta, sababtoo ah haddii metadata ah. Si aad isugu misho laba ama kabadan dhacdo aad u baahan tahay in ay hoos u qabtaan wareeg dooro dhacdooyinka in wada tago, markaas xaq-riix dooro "midowdo Events." Waxa kale oo aad ku samayn kartaa jiiday mid ka mid album galay oo kale ah.
17. Change Key Photo in Album
Waad beddeli kartaa sawir ah in wakiil ka dhacdo ee Events taxay. Sawir Tan waxa loo yaqaan sawir muhiimka ah, oo aad bedeli kartaa doorataa sawirka midig gujinaya sawir iyo xulashada Samee Key Photo markii gudaha Event ah.
18. Xaqiiji wajahaya duwan ee hal mar
Wajiyada waa hab aad u faa'iido badan in uu abaabulo sawir kasta oo qof gaar ah maktabadda iPhoto aad, laakiin ka badan daran waa in ay doortaan Waji walba mid mid. Waxaan dooran kartaa wejiyo badan oo ay adakaanayso qofka Wajigooda aad rabto in aad si loo xaqiijiyo, ka dibna aagga ku tilmaamay "Qof kale oo laga yaabaa sawirada hoose," jiidi sanduuqa ku hareeraysan sawiro aad rabto si loo xaqiijiyo. Markaas, dooro button Xaqiiji Magaca in toolbar hoose.
19. Ku dar Location Information Gacanta
Waxaad ku dari kartaa macluumaadka goobta gacanta ay saddex siyaabood: by album / dhacdo, by sawir, ama ay sawiro kala duwan. Marka aad mouse ka badan geeska hoose ee midigta ah ay dhacdo, album ah, ama sawir aad ka ogaan doonto yar ah "i." This gujinaya waxay keeni doontaa in guddi pop-up oo u oggolaan doonaa inaad sheeg macluumaad metadata sida meel. Nooca magaalo duurka goobta iyo iPhoto baadhi doonaa si aad u ogaato meesha aad joogto. Ka dib markii ay ku daray macluumaadka goobta, Dooro sameeyo si loo badbaadiyo. Waxaad dooran kartaa sawiro badan, albums ama dhacdooyinka inaad iska baddasho goobta.
20. Edit Images Side-ilaa-dhinac
Waxaa suurto gal ah in ay wax ka bedel images badan oo dhinac-ilaa-dhinac. Habkaani waa waxtar u codsanaya saamayn inay sawiro la mid ah. In sidaa la yeelo, si fudud u doortaan laba ama in ka badan sawirrada albamka ah ka dibna dooro button edit in toolbar ka hooseysa.
21. Talaabada Iyada Raadka
iPhoto bixisaa saamaynta dhowr Spice kartaa ilaa aad tafatirka .. saamaynta Kuwaas waxaa ka mid madow iyo caddaan, oo qaraami ah, Edge Blurs iyo kuwa kale. Waxaad ka codsan kartaa saamaynta doorataa badhanka Raadka hoose ee guddiga edit ah. Waxaad ku dari kartaa saamaynta badan doorataa saamaynta badan. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa xoojinta saamaynta.
22. Qari Photos
Waxaad ku qarsan kartaa sawiro qaar aanad rabin in qof kasta si ay u muujiyaan. In la qariyo sawir ama koox photos, iyaga doortaan in aad maktabadda iyo xaq-riix si loo doorto "Qari Photo".
23. Share on Facebook, Flickr, iyo MobileMe
iPhoto kuu ogolaanaysaa inaad sawiro aad la MobileMe, Facebook, ama Flickr. Si aad u wadaagno album la Facebook, dooro album ah, haddii ay dhacdo, ama koox ka mid ah sawirada, ka dibna dooro Facebook si xaq ah toolbar hoose. Haddii aad hore u saxiixo ee galay Facebook, daaqad curiyo doonaa in laydin sii xulo fursadaha qaybsiga aad.
24. Calan u ah External Photo Editor
Mararka qaarkood iPhoto aan buuxin laga yaabaa in loo baahan yahay ee ah qalabka tafatirka awood badan. Habkaani wuxuu kaa caawinayaa inaad xaalkaa photos aad qalab kale oo tafatir sida Adobe Photoshop ama qalab kale oo tafatir.
Si taas, madaxa sameeyo si iPhoto> rabtid (ama Command saxaafadeed + comma). In Tab Guud, hoos Edit Photo, waxaa jira saddex doorasho, Edit in Main Window, Edit Isticmaalka Full Screen, iyo Edit ee Codsiga kale. Waxaan dooran doonaa Edit in codsiga. A suuqa kala hadal arbushin doonaa in aad keento codsiga ee aad dooratay; falgali codsiga dooro Open.
25. Copy / Goobaha koollada ka mid ah Multiple Photos
Waxaad si fudud u nuqul ka kartaa macluumaad meel ka mid ah sawir iyo paste in sawir kale ama sawiro. In sidaa la yeelo, si fudud nuqul (Command + C) sawir leh meel kasta oo haysta. Dooranaysaa sawiro badan oo ay leeyihiin meel la mid ah oo aadan xaq u guji> goobta koollada.
> Resource > Video > Best Talo & Tricks in Noqo User Power of iPhoto '11